Cryptotrading लागि व्यापार Bots - Blockchain समाचार
कसरी Bots cryptotrading लागि काम गर्न?
Bots सफ्टवेयर को रूप मा अवस्थित, जो, प्रायजसो, कार्यक्रम इन्टरफेस मार्फत गुप्त-आदानप्रदान संग प्रत्यक्ष काम गर्छ (एपीआई). Bots को लक्ष्य स्वतः सम्पत्ति संग लेनदेन गर्न छ: यसका लागि, को Bots बजार जानकारी एक विस्तृत विश्लेषण सञ्चालन र, प्राप्त डाटा आधारित, अन्तिम लेनदेन मा निर्णय. चुनिएको रणनीति आधारमा, मापदण्डहरू सेट र लक्ष्यहरू, एक व्यापारी Bots एक चार प्रकार चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
व्यापार Bots गुप्त-विनिमय पाएको जानकारी विश्लेषण, र खरीद र व्यापारी रोजेका प्यारामिटरहरू आधारित cryptocurrency को बिक्री बारे निर्णय. Bots यस प्रकारको एकैचोटि धेरै मापदण्डहरु काम गर्न अनुकूलित गर्न सकिन्छ, वा तपाईंले विश्लेषकहरूले विकास थिए पूर्वपरिभाषित रणनीति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
आर्बिट्राज Bots मूल्य फरक देखि लाभ प्राप्त गर्न लेनदेन बनाउन विभिन्न आदानप्रदान मा Cryptocurrency को कोटेशन मा परिवर्तन निगरानी र स्वतः.
अनुकूलन Bots, वा आदेश Bots, स्वयं प्रविष्ट वा स्वचालित मोडमा चयन गरिएका छन् छन् पूर्वपरिभाषित मानकहरु साथ लेनदेन गर्न प्रयोग गरिन्छ.
लिपि बोटको मूल सफ्टवेयर को रूप मा अवस्थित, यस व्यापारी स्वतन्त्र बोट काम कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ जो आधारमा. गुप्त बजार मा व्यापार को intricacies गर्ने थाहा अनुभवी व्यापारीहरु द्वारा प्रयोग.
गुप्त बजार मा ट्रेडिंग Bots मा जोखिम
बिग्रेको सफ्टवेयर: सबै हाल उपलब्ध Bots व्यावसायिक विकासकर्ताहरूले र अनुभवी गुप्त व्यापारीहरु को एक टीम द्वारा शुरू गरियो छैन. यसबाहेक, बोट, जसको कोड मा गल्ती थियो, बस छैन अदक्ष हुन सक्छ, तर पनि महत्वपूर्ण वित्तीय घाटा कारण, विशेष गरी एक गरिबी चुनिएको रणनीति संग संयोजन मा. त्यसैले, व्यापार को लागि यो एक विश्वसनीय प्रतिष्ठा र उपकरण को एक विस्तृत श्रृंखला संग मात्र सिद्ध Bots छनौट लायक छ.
को cryptocurrency को तात्कालिक पतन: cryptocurrencies एक अत्यन्तै अस्थिर सम्पत्ति हो, संक्षिप्त विरुद्ध बीमा छैन. त्यसैले, जून मा 2017, को GDAX मुद्रा मा, एक प्रमुख सम्झौता फलस्वरूप, हावा को मूल्य गिरावट आएको $ 319 गर्न 10 सेन्ट. फलस्वरूप, -स्टप हानि सीमा सेट गर्ने होइन व्यापारीहरु, सेकेन्ड को एक मामला मा, भोगे विशाल घाटा. यस सन्दर्भमा, केही व्यापारीहरु Bots विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र काम गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् र एक अनुभवी व्यापारी अधिक सही बजार मा स्थिति भविष्यवाणी हुनेछ.
ठगी: को unregulated बजार मा, ठगी को cryptocurrency अवस्थामा एकदम अक्सर उत्पन्न, र काम Bots संग कुनै अपवाद छ. डिसेम्बर मा 2017, को Hexabo घोटाला बोट सक्रिय बजार मा संचालित, प्रयोगकर्ताको धन अवरुद्ध, यस गुप्त मुद्रा को उत्पादन निलंबित, र त्यसपछि काम गर्न छोड्यो, संभाव्यतः प्लेटफर्म को विकासकर्ताहरूले सबै रकम पठाएर. पनि, एक व्यापारी अनुसार, तपाईं लोकप्रिय मुक्त Bots हुँदैन, किनभने सँगै तिनीहरूलाई तपाईंलाई खराब सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्छन्, जो उद्देश्य निजी पर्स कुञ्जीहरू पहुँच बढाउनका वा खानी लागि व्यापारी गरेको नोड प्रयोग गर्न छ.
Cryptotrading लागि लोकप्रिय Bots
3अल्पविराम स्वचालित cryptotrading लागि एक लोकप्रिय भुक्तानी बोट छ, जो Bittrex जस्ता आदानप्रदान काम गर्छ, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi र YOBIT. यसलाई विविध विभागहरू को एक ठूलो चयन प्रयोगकर्ताहरूका चयन गर्न सक्नुहुन्छ लगानी गर्न वा बजार अवस्था ट्र्याक गर्न विश्लेषणात्मक औजारको रूपमा प्रयोग गर्न प्रदान गर्दछ. यसलाई-स्टप हानि आदेश र लिन लाभ को साथ प्रयोगको लागि प्रदान. यसलाई चार सदस्यता स्तर छ – “सुरुमा” लागि $ 30, “व्यापार” लागि $ 50, “व्यावसायिक” लागि $ 100, र पनि “व्यक्तिगत” सम्झौता लागि.
Cryptohopper बादलले-आधारित व्यापारी गरेको कम्प्युटर अफलाइन छ वा बन्द पनि काम गर्नेछ भनेर भुक्तानी बोट छ. स्वतन्त्र अनुभवी व्यापारीहरु बोट काम अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ, जबकि शुरुआती उपलब्ध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ “autopilot”. बोट पनि विश्लेषण र विगतमा गरेका व्यापार प्रणाली संकेत को प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ (backtest), एक रोक्नुहोस् हानि क्रम नियन्त्रण अल्गोरिदम छ, र धेरै आदानप्रदान सिधै व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ. यो मासिक सदस्यता तीन प्रकारका छन् – लागि $ 19, $ 49 र $ 99. प्लेटफर्म एक विस्तृत विश्लेषण यहाँ पाउन सकिन्छ.
Cryptotrader व्यापार को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय क्लाउड cryptobots मध्ये एक छ. गुप्त-मुद्राहरू र आदानप्रदान को एक ठूलो संख्या समर्थन. पूर्ण प्रयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित हुनुपर्छ. backtesting र रणनीतिक बजार कार्य प्रदान गर्दछ, जो अनुमति दिन्छ प्रयोगकर्ता रणनीति व्यापार गर्न. यो मासिक सदस्यता पाँच स्तर छ: लागि 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC र 0.0214 BTC.
Haasbot स्वचालित व्यापार को लागि एक मंच छ, इरादा, सबै भन्दा पहिले, अनुभवी Bitcoin-व्यापारीहरु लागि. प्राविधिक विश्लेषण डाटा देखि व्युत्पन्न रणनीति प्रयोग. यो बोट भुक्तानी र वार्षिक सदस्यता तीन स्तरहरू छन् छ: लाइसेन्स “शुरुवात” लागि 0.073 BTC, “सरल” लागि 0.127 BTC र “विस्तारित” लाइसेन्स, जो लागत 0.208 BTC. खरिद लाइसेन्स आधारमा, प्रयोगकर्ता विभिन्न कार्यहरु को एक नम्बर प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने धेरै परस्पर Bots कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ.
Gekko निःशुल्क खुला स्रोत GitHub डाउनलोड गर्न सकिन्छ कि बोट छ. यसलाई प्रयोग गर्न पर्याप्त सरल छ, विस्तृत चरण-चरण निर्देशनहरूको अनुभवहीन व्यापारीहरु लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने छ. एक सुविधाजनक इन्टरफेस छ, रणनीति backtest र व्यापार को परिणाम दृष्टिगत गर्न सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, बोट सफ्टवेयर सबैभन्दा सञ्चालन प्रणाली मा चल्छ.
Zenbot Bitcoin व्यापारीहरु लागि अर्को खुला स्रोत बोट छ. बोट प्रयोगकर्ता कोड डाउनलोड र यसको काम गर्न परिमार्जनहरू बनाउन सक्छ, र यसको अल्गोरिदम मुख्य अपरेटिङ सिस्टम लागि उपलब्ध छ. र, Gekko विपरीत, Zenbot उच्च आवृत्ति लेनदेन प्रदर्शन र मूल्यांतर अवसर लागू गर्न सक्नुहुन्छ. तथापि, यस गुप्त समुदायमा यो बोट एक लामो समय को लागि अद्यावधिक गरिएको उल्लेख गरेको छ, र त्यसैले नयाँ लोकप्रिय आदानप्रदान काम गर्न कुनै मौका छ.
Cryptotrading लागि Bots
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 10.05.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 11.05.2018